screen saver နဲ့ lock ချလို့ရပါတယ် . ။ ကိုကအပြင်ခဏသွားချင်ရင် screen ကို password ပေးပြီး lock ချသွားလို့ ရပါတယ် .. ကဲဒေါင်းချင်ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းလော့လုပ်လိုက်ပါ .. ကိုက ကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ အပြင်ကိုသွားချင်တယ် . Download ကလဲ လုပ်ထားတယ် မပြီးသေးဘူး . ဒုက္ခပဲဆိုပြီး ညည်းနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ . သူ့ဟာသူ download လုပ်နေပါလိမ့်မယ် . တစ်ချို့ screen locker တွေဟာ Lock တော့ချပေးတယ် . ဒါပေမယ့် အင်တာနက်ကို ရပ်ထားလိုက်တယ် . ဒါလေးကတော့ အဆင်ပြေပါတယ် .
(၁) Download လုပ်ထားတဲ့ file ကို install လုပ်လိုက်ပါ .
(၂) ပြီးတာနဲ့ start Bar က ညာဖက်မှာ x ပုံစံလေးနဲ့ icon လေးကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ် .
(၃) Rightclick နှိပ်ပြီး setpassword ကိုပေးလိုက်ပါ .
(၄) ကိုပေးချင်တဲ့ Password ကိုပေးလိုက်ပါ .
(၅) ပြီးတာနဲ့ ကိုအပြင်ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အခုနက X icon လေးကို တစ်ချက်ကလစ်လိုက် တာနဲ့ lock ကျသွားလိမ့်မယ် . ကဲ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ ..
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:30 AM